Madaxweynaha Jubbaland oo la filayo in uu Garoowe yimaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Jubbaland oo la filayo in uu Garoowe yimaado
November 15, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo loo yaqaan Axmed Madoobe ayaa maanta oo Isniin ah la filayaa in uu yimaado Garoowe, sida ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Inta uu joogo Garoowe, Axmed Madoobe ayaa kulan la qaadan doona madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Safarkiisa ayaa imaanaya iyadoo ay soo dhowyihiin doorashada xubnaha aqalka hooes ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Doorashada xubnaha aqalka sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa asbuucaan soo gabogabowday.
Cabdikariin Muuse (Qalbi Dhagax) wuxuu ahaa Sarkaal katirsanaa Ciidankii Xoogga Dalka Soomaliyeed (CXDS), wuxuu ku dhaawacmay dagaalkii 1977 dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia oo lagu xoraynayey dhulka Soomaaliyeed (Howd/ Ogadenia), Walaalkiis wuxuu ku dhintay isla dagaalkaas. [...]